“हरेक दम्पतीले स’म्भो’ग गर्नु भन्दा पहिले जान्नैपर्ने यी ५ कुराहरु”!हेर्नुहोस भिडिओ सहित – Sanjal Nepal
Homeसमाचार“हरेक दम्पतीले स’म्भो’ग गर्नु भन्दा पहिले जान्नैपर्ने यी ५ कुराहरु”!हेर्नुहोस भिडिओ सहित
November 26, 2020 admin समाचार 1676
काठमाडौं । आजभोलीको भागदौड र ब्यस्तताले गर्दा मानिसको विवाहको केहि दिन पछि नै सुखभोगको चाहाना हराउन थालेको छ । दिनको थकान र अर्को दिनको कार्यालय वा बच्चाहरूको स्कूलको कारण ओछ्यानमा यो सुत्ने बित्तिकै निद्रा लाग्न थाल्छ ।”यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला,??
यदि यो दिनचर्या यसरी नै बितिरहेको छ भने यो गलत हो किनभने सुखभोग एक जैविक नियोडिमियम हो जुन दुई व्यक्तिको बीचको बन्धनलाई अझ प्रगाढ बनाउँदछ । आज हामी यसका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं ।”यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला,??
मसाजले रक्त संचार बढाउँदछ
शरीरको मालिशले रक्त संचार बढाउँछ र शरीरको सबै भागमा रगत पुग्छ । यदि तपाईंको साथी थकित महसुस गर्दैछ भने मसाजले तनाव कम गर्न मदत गर्दछ । त्यसपछि बिस्तारै सुखभोगको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै आफ्नो साथिलाई मन पर्ने मनपर्ने संगीत सुनाउँने र सुगन्धित तेलहरूले मालिस गर्ने गर्नुपर्दछ ।
मायाले स्पर्श गर्ने
आफ्नो साथिर्लाइ बिस्तारै तपाइको मायालु स्पर्श महसुस गराउँनु पर्छ । यसले तिनीहरूको उत्साह बढाउन काम गर्छ । यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि एक कहिल्यै मालिशमा हतार गर्नु हुँदैन। मालिस गर्दा हतार गर्नुहुदैन साथिको रियाक्सनलाई नोटिस गदै अगाडी बढ्नपर्छ ।”यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला,??
शरीरको इशाराहरू बुझ्ने
विज्ञहरूका अनुसार छाला शरीरको आवश्यकक्ता हो । जब हामी कसैलाई छुन्छौं तब अक्सीटोसिन हर्मोन उत्पादन हुन्छ । जब दुईजना एक अर्काको नजिक हुन्छन् , तिनीहरूको शरीरले उनीहरू कुन भाग छुन्छन् भन्ने संकेत दिन्छ, त्यसपछि तिनीहरूको शरीरको भाषा बुझ्नुपर्छ
हल्का हातले मालिस गर्ने
एक हल्का हातले आफ्नो साथिको काँध, घाँटी पछाडि , मालिश गनपर्छ । बिस्तारै खुट्टा तिर आउँने र हल्का चुम्बन पनि गर्दा राम्रो हुन्छ । बिस्तारै नाजुक भागहरूमा ध्यान केन्द्रित गनपर्छ ।
यी भागहरूमा बिषेश ध्यान दिने
घाँटी पछाडि र घाँटी पछाडि शरीरका केही भागहरू र घुँडा पछाडिको भागहरूमा जहाँ नसाहरू बढी हुन्छन् । त्यस्ता संवेदनशील भागहरू चलाउँदा सुखभोगको समयमा बढी आनन्द आउने गर्छ ।
यि अंगबाट सुरु गर्ने
शुरुवाती समयमा आफ्नो साथिको हत्केला बाट शुरु गर्नुपर्छ । बिस्तारै हत्केलामा औंलाहरू राखेर हत्केलाको तल्लो भागमा मायाले टच गर्ने ।”यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला,??
जसले मलेसियामा कामको क्रममा हात गुमाए, कम्पनीले गरिदियो यस्तो उदाहरणीय काम
February 9, 2021 admin समाचार 468
काठमाडौ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुक पुगेका नेपालीहरुले धेरै दुख पाएका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर यस्तो उदाहरण पनि छ जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले काम गर्ने राम्रा कम्पनी पनि छन् जसले आफ्ना
November 26, 2020 admin समाचार 1686
December 17, 2020 admin समाचार 3247
काठमाडौं – श्रीमान् अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनको ६ वर्षपछि अभिनेत्री स्वेता खड्काले गत मंसिर २२ गते सोमबार धनगढीका विजयेन्द्र रावतसँग धुमधामसँग दोश्रो बिहे गरिन् । धेरैले उनको साहस र कदमको सम्मान र प्रशंसा गरे ।